Bazobhema bakholwe abathandi beChiefs | isiZulu
Bazobhema bakholwe abathandi beChiefs
UKhisimusi omuhle kubalandeli beKaizer Chiefs
'IChiefs isiwaphendulile amatafula'
UKomphela usencome izithenjwa zeChiefs
Durban - Bazobhema bakholwe abalandeli beKaizer Chiefs emdlalweni neHighlands Park we-Absa Premiership ozokuba ngoMgqibelo ngo-18:00 eMoses Mabhida Stadium, eThekwini.
UBernard Parker ongumgadli weziMpofana, uthi abathandi bale kilabhu kumele baphume ngezinkani ukuzobuka le kilabhu icoboshisa iHighlands ngesitayela sezinga eliphezulu.
Lo mdlalo ubhekwe ngabomvu ngabalandeli beChiefs kwazise le kilabhu ziyihambela kahle izinto kulezi zinsuku, kubika iLANGA.
Isinqobe imidlalo eyisihlanu ilandelana okwenze yabuyelwa nayithemba ngesicoco seligi. Kulindeleke ukuba lizamazame iTheku ngale mpelasonto njengoba abalandeli bale kilabhu bezosuka kuwona wonke amakhona eNingizimu Afrika bezobuka le kilabhu.
UParker uthi abalandeli babo bazophinda baphume bejabule kulo mdlalo kwazise nangeledlule bathathe amaphuzu amathathu kwiMaritzburg United eHarry Gwala Stadium, eMgungundlovu.
"Ngeledlule besiKwaZulu-Natal, sashiya kukhalwa eMgungundlovu emuva kokuba bese kuphele iminyaka eminingi sihluleka wukuhlula iTeam of Choice (isekhaya). Nakulo mdlalo sizokwenza okufanayo, sizoyishaya inabe iHighlands.
Njengoba umdlalo wethu ulethwe eThekwini nje ngijabule kabi ngoba abalandeli bethu baseseka kakhulu uma silapho futhi kangingabazi ukuthi bazophuma ngobuningi babo," kusho uParker.
Uqhube ngokwexwayisa abalandeli ngokuthi udlame kalusona isixazululo nxa kukhona abangeneme ngakho.
Ngeledlule abalandeli bePirates bavuke indlobane ezabo zinatshiswa yiMamelodi Sundowns ngo-6-0 okwenze kwamiswa umdlalo ihora lonke isimo sishubile.
"Engikucelayo nje wukuthi uma kukhona abangakuboni kahle bangasebenzisi udlame. Kodwa-ke ngiyathembisa ukuthi ngeke sibaphoxe. Esikucelayo nje wukuthi beze ngobuningi babo bazobona ibhola eliseqophelweni eliphezulu," kusho uParker.
I-PSL imjezise kanzima umdlali ogeve omunye ngamazinyo
IPremier Soccer League ijezise kanzima umdlali weThongathi FC uPhilani "Wele" Gumede olume uMenzi Hlophe weRichards Bay FC emdlalweni wala makilabhu agijima kwiNational First Division.
Usikaza ukucela ukudedelwa kwiChiefs umdlali ongasalitholi ijezi
Kuvela ezithi usikaza ukucela ukukhululwa kwiKaizer Chiefs uHendrick “Pule” Ekstein osesizwa ngendaba isikimu kule kilabhu ecazelane amaphuzu neBidvest Wits kuba ngu-1-1 kowe-Absa Premiership.
Uyaqhubeka nokuphathisa ngekhanda izikhulu zeMamelodi Sundowns uKhama Billiat ovalele igoli lale kilabhu ihlula iCape Town City ngo-1-0 emdlalweni we-Absa Premiership.